छिमेकि राष्ट भारतमा बढ्दै कोरोना, कति पुग्यो मृतक र संक्रमित संख्या ? — Imandarmedia.com
छिमेकि राष्ट भारतमा बढ्दै कोरोना, कति पुग्यो मृतक र संक्रमित संख्या ?
काठमान्डाै । भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । बुधबार १८ जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ ।हाल भारतमा कोरोना संक्रमित संख्या ५ हजार ९ सय १९ पुगेको छ । त्यहाँ बुधबार मात्रै ५ सय ६५ जना संक्रमित फेला परेका छन् ।संक्रमितमध्ये ५ सय ६ जना निको भइसकेका छन् भने अन्यको अवस्था सामान्य रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
विश्व कोरोना अपडेटपछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाका कारण ६ हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन् । बुधबारदेखि बिहीबार बिहानसम्मको तथ्याङकअनुसार ६ हजार ३ सय ६९ को मृत्यु भएको छ ।